သန့်ရှင်းမြင့်မားသောအလူမီနီယမ် sputtering ပစ်မှတ်စက်မှုလုပ်ငန်း။ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအသစ်စက်မှုလုပ်ငန်းများလျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းနှင့်အတူ, အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်အသစ်များအတွက် ၀ ယ်လိုအား (ပစ်မှတ်များအပါအဝင်) သန့်ရှင်းမြင့်မားသောအလူမီနီယံကို အခြေခံ၍ ဆဋ္ဌမငါးနှစ်စီမံကိန်းကာလအတွင်းတိုးတက်မှုနှုန်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားလိမ့်မည်, ငါ့နိုင်ငံရဲ့ “အမျိုးသားအဆင့်မြင့်နည်းပညာသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (863 အစီအစဉ်) ပစ္စည်းနည်းပညာနယ်ပယ်သစ် “အရွယ်အစားကြီး Ultra-high-Purity Aluminium Target Manufacturing Technology” အဓိကစီမံကိန်းလျှောက်လွှာလမ်းညွှန်ချက်များ” ပန်းတိုင်ရောက်ရန်လိုအပ်သည်: အလွန်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောအလူမီနီယမ်မှတဆင့်၊ အလူမီနီယံအလွိုင်းပစ်မှတ်များကိုပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းတို့တွင်အဓိကနည်းပညာ, အကြီးစားပေါင်းစပ်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောအလူမီနီယံနှင့်အလူမီနီယံအလွိုင်းပစ်မှတ်များ၏ကြီးမားသောအရွယ်အစားပြင်ဆင်မှုနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်းနည်းပညာကိုအပြည့်အဝဆုပ်ကိုင်ပါ။; ဘက်စုံသုံးသန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောအလူမီနီယမ်နှင့်အလူမီနီယံအလွိုင်းပစ်မှတ်ထုတ်ကုန်များပေါင်းစပ်ထားသောဆားကစ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် TFT-LCD အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်; အလွန်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောအလူမီနီယမ်သန့်စင်ပြီးသန့်စင်ပြီးပြည့်စုံသောစက်မှုကွင်းဆက်တစ်ခုဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်၏နိုင်ငံတွင်ရည်မှန်း။ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ တရုတ်တွင်သိုလှောင်သော disk များနှင့် semiconductor ထုတ်ကုန်များကို localization, သန့်ရှင်းမြင့်မားသောအလူမီနီယံပစ်မှတ်များလိုအပ်မှုသည်ပိုမိုမြင့်တက်လာလိမ့်မည်, စျေးကွက်အလားအလာသည်ကျယ်ပြန့်သည်.
စာရင်းများအရသိရသည်, ပြည်တွင်း၌သန့်ရှင်းမြင့်မားသောအလူမီနီယမ်၏နှစ်စဉ်ကွာဟချက်သည်အကြောင်းဖြစ်သည် 100,000 တန်ချိန်အဆုံး၌ 2008, ရှိနိုင်ပါတယ် 8 သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောအလူမီနီယမ်ကိုထုတ်လုပ်နိုင်သောလုပ်ငန်းများ, စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့်ပတ်သက် 5.70,000 တန်ချိန်. အားဖြင့် 2012, သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောအလူမီနီယမ်ကိုထုတ်လုပ်နိုင်သောကုမ္ပဏီအရေအတွက်သည်တိုးလာမည် 11, နှင့်စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်သို့ရောက်ရှိနိုင်သည် 12.50,000 တန်။ ငါပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးတိုးတက်ခြင်းတို့ကိုယုံကြည်ပါသည်, သန့်စင်မြင့်အလူမီနီယမ်သည်အလူမီနီယံစက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။, ငါ့နိုင်ငံရဲ့သန့်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အလူမီနီယမ်ထုတ်လုပ်မှုကမမြင့်ဘူး, ၎င်းသည်အမျိုးသားအဆင့်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောအလူမီနီယံပစ်မှတ်ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်များကိုမဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါ, ကျွန်ုပ်နိုင်ငံ၌သန့်ရှင်းမြင့်မားသောအလူမီနီယမ်၏နှစ်စဉ်ထွက်ရှိမှုသည်အကြောင်းဖြစ်သည် 50,000 တန်ချိန်, ထုတ်ကုန်များ၏ရောင်းလိုအားသည်ဝယ်လိုအားထက်ကျော်လွန်သည်။.
အကြို: စာဝှက်ပါ, လေ ၀ င်လေထွက်အားဖြင့်ပစ်မှတ်ပစ္စည်းကိုအသုံးချခြင်း
နောက်တစ်ခု: မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း LCD ဖန်သားပြင်နယ်ပယ်တွင်သတ္တုမော်လီဘင်နမ်ပစ်မှတ်သည်မည်သည့်အခန်းကဏ္ကပါဝင်သနည်း။